Joshua anotuma vasori vaviri kuJeriko (1-3)
Rakabhi anohwandisa vasori (4-7)
Vimbiso kuna Rakabhi (8-21a)
Chiratidzo chetambo tsvuku (18)
Vasori vanodzokera kuna Joshua (21b-24)
2 Zvino Joshua mwanakomana waNuni akatuma varume vaviri pachivande kubva kuShitimu+ kuti vanosora* nyika. Akavaudza kuti: “Endai munoongorora zvakaita nyika yacho, kunyanya Jeriko.” Saka vakaenda vakasvika pamba peimwe pfambi yainzi Rakabhi,+ vakagara ipapo. 2 Mambo weJeriko akaudzwa kuti: “Varume vechiIsraeri vapinda muno usiku huno kuti vasore nyika.” 3 Mambo weJeriko akabva atumira shoko kuna Rakabhi, achiti: “Budisa varume vauya mumba mako, nekuti vauya kuzosora nyika yese.” 4 Asi mukadzi wacho akatora varume vaya vaviri, akavahwandisa. Akabva ati: “Chokwadi, varume vacho vauya kwandiri, asi handina kuziva kuti vanga vachibva kupi. 5 Asi pakwasviba, gedhi reguta rava kuda kuvharwa, varume vacho vabva vabuda. Handizivi kuti vaenda kupi, asi kana mukakurumidza kuvatevera, muchavabata.” 6 (Zvisinei, iye akanga avakwidza padenga remba, akavahwandisa pakati pemashanga emufurakisi* akanga akarongwa ipapo.) 7 Saka varume vacho vakavatevera vakananga kumazambuko+ eJodhani, uye gedhi reguta rakavharwa varume ivavo vaivatevera pavakangobuda. 8 Vasori vacho vasati varara, Rakabhi akakwira padenga remba pavaiva. 9 Akati kuvarume vacho: “Ndinoziva kuti Jehovha achakupai nyika,+ uye tiri kukutyai.+ Vagari vese vemunyika vapera simba nemhaka yenyu,+ 10 nekuti takanzwa nezvekuomesa kwakaita Jehovha mvura yeGungwa Dzvuku pamberi penyu pamakabva kuIjipiti+ uye zvamakaita kumadzimambo maviri evaAmori, Sihoni+ naOgi,+ avo vamakaparadza mhiri* kwaJodhani. 11 Patakazvinzwa, takatya, uye hapana munhu achine ushingi hwekukurwisai, nekuti Jehovha Mwari wenyu ndiMwari kumusoro kudenga nepasi pano.+ 12 Zvino ndapota, ndipikirei naJehovha, kuti zvandakuitirai mutsa,* muchaitirawo mutsa imba yababa vangu, uye munofanira kundipa chiratidzo chekuti muchaita zvamataura.* 13 Munofanira kuponesa baba naamai vangu, nevana vese vemumba medu nevanhu vese vavainavo, uye munofanira kutinunura kuti tirege kufa.”*+ 14 Varume vacho vakabva vati kwaari: “Tingatofa hedu isu panzvimbo penyu!* Kana mukasaudza vanhu zvatafambira, tichakuratidzai rudo rusingachinji uye tichatendeka kwamuri patichapiwa nyika yacho naJehovha.” 15 Pashure paizvozvo akaita kuti vaburuke netambo nepahwindo, nekuti imba yake yaiva parusvingo rweguta. Aitogara nechepamusoro perusvingo.+ 16 Akabva ati kwavari: “Endai kumakomo muhwande ikoko kwemazuva matatu, kuti vaya vari kukutsvagai vasakuwanai. Kana vadzoka, munogona kuenda henyu.” 17 Varume vacho vakati kwaari: “Mhiko iyi yawaita kuti tipike+ tichangoichengeta chete 18 kana patichapinda munyika ukasungirira tambo iyi yeshinda tsvuku pahwindo rawaita kuti tiburuke naro. Unofanira kuita kuti baba vako, amai vako, hanzvadzi dzako, nevanhu vese veimba yababa vako, vave newe mumba mako.+ 19 Kana pakaita anobuda mumba mako achienda panze, inenge iri mhosva yake,* uye isu tinenge tisina mhosva. Asi kana pakaita anokuvadzwa pavanhu vanoramba vainewe mumba mako, inenge iri mhosva yedu. 20 Asi kana ukataura zvatafambira,+ isu hatizovi nemhosva pamusoro pemhiko yako yawaita kuti tipike.” 21 Iye akati: “Ngazviitike sekutaura kwamaita.” Akabva aita kuti vaende, ivo vachibva vaenda. Pashure peizvi, akasungirira tambo tsvuku pahwindo racho. 22 Saka vakasimuka vakaenda kumakomo, vakagara ikoko kwemazuva matatu, kusvikira vaya vaivatevera vadzoka. Vaivatevera vacho vakanga vachivatsvaga mumigwagwa yese asi vakavashaya. 23 Varume vaya vaviri vakabva vaburuka vachibva kumakomo, vakayambuka rwizi, vakasvika kwaiva naJoshua mwanakomana waNuni. Vakamuudza zvinhu zvese zvakanga zvaitika kwavari. 24 Vakabva vati kuna Joshua: “Jehovha atipa nyika yacho yese.+ Vagari vese vemunyika yacho vatopera simba nemhaka yedu.”+
^ Kana kuti, “vanoongorora.”
^ Kana kuti “zvandakuratidzai rudo rusingachinji.”
^ Kana kuti “chandinogona kuvimba nacho.”
^ Kana kuti “munofanira kununura mweya yedu kuti irege kufa.”
^ Kana kuti “Mweya yedu ichafa panzvimbo penyu!”
^ ChiHeb., “ropa rake richava pamusoro wake.”